December 12, 2017 latestnewsLeaveaComment on मधेसमा कत्ल की रातः दारुमांस, ढौवाकौडी र जातभात
कल्याणपुर सिरहा । मधेसमा चुनावअघिको मौन अवधिलाई ‘कत्ल की रात’ भन्ने गरिन्छ । कत्ल अर्थात हत्या । चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा उम्मेदवार जतिसुकै बलियो देखिए पनि कत्ल की रातले नतिजा उलटफेर बनाउन सक्छ । कत्लकी रातमा के सम्म हुन्छ ? एक सातासम्म मधे...
December 12, 2017 latestnewsLeaveaComment on संकटमा कांग्रेसः देउवाले राजीनामा देलान् ?
धेरै मानिसहरुले यसलाई हतारमा गरिएको विश्लेषण ठान्न सक्छन् । तर, मतगणनाको सुरुआती रुझानले के देखाइसकेको छ भने यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्ने र वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने पक्कापक्की जस्तै छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको दाबीअ...
December 12, 2017 December 12, 2017 latestnewsLeaveaComment on भारतीय अक्षबाट बाहिरिँदै छन्, नेपाल र माल्दिभ्स
घटनाक्रमसँगै दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक नक्सा परिवर्तन हुँदै गएको छ । गत बिहीबार नेपालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक गणनाले वाम गठबन्धनले नै अग्रता लिइरहेको देखिन्छ । नेपालका दुई ठूला वामपन्थी पार्टी गठबन्धनमा आवद्ध छन् । र, त्यही गठबन्धन...